तीन सफल नेपाली चलचित्र निर्माण गरिसकेका सन्तोष सेनले अब कस्तो चलचित्र लिएर ऑउदैछन त?जानकारीको लागी पुरा पढ्नुहोस – kollywood hungama
तीन सफल नेपाली चलचित्र निर्माण गरिसकेका सन्तोष सेनले अब कस्तो चलचित्र लिएर ऑउदैछन त?जानकारीको लागी पुरा पढ्नुहोस
२०७१ सालमा यो हाम्रो फिल्म नगरीमा एउटा नया नाम र नया ब्यानरको खुब चहलपहल देखिएको थियो ।सामाजिक संजालका भित्ताहरु देखि सवारी साधनको भित्ताहरु सम्म¸ विभिन्न अनलाईन मिडियाहरु देखि अन्य सामाग्रीहरु मा त्यहि नाम छरपष्टै देखिन्थ्योः- निर्माता सन्तोष सेन र आसुसेन फिल्मस । यि ब्यक्तिले आफ्नो यो ब्यानरमा निकै महंगो बजेटमा चलचित्र निर्माण गर्दैथियो । चल्तापुर्जा निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्देशनमा चलचित्र चंखे-शंखे-पंखे को ब्यापक प्रचार प्रसार गरिएको थियो । चलचित्रको बजेट पनि निकै माथीको थियो ।
२०७२ सालमा यो चलचित्र रिलिज पनि भयो तर त्यहि साल आएको विनाशकारी महाभुकम्पको कारण यो चलचित्र हलबाट बाहिरियो र केहि महिना पश्चात पुनः यो चलचित्र हलहरुमा प्रदर्शनको लागी रिलिज गरियो । देशभक्तिको कथा समेटिएको यस चलचित्रमा चारजना बेरोजगार युवाहरुको क्रियाकलाप देखाईएको थियो तर चलचित्रले आशातित ब्यापार गर्न सकेन । चलचित्र नचले पनि सन्तोष सेनको नाम फिल्म नगरीमा स्थापित हुनपुग्यो र पहिलो चलचित्र बाट ब्यापार घाटा भएपनि उन्ले पुन थापा कै निर्देशनमा अर्को चलचित्र निर्माणको घोषणा गरे र चलचित्र निर्माण पनि भयो । चलचित्र थियो प्रेमगीत । विशुद्ध प्रेमकथामा आधारीत भएर निर्माण भएको यस चलचित्रको गीत संगीत चलचित्र प्रदर्शन अगावै निकै हिट भएका थिए । चलचित्र ले निकै राम्रो ब्यापार पनि गर्न सफल भयो र यस चलचित्रले निर्माता सेनलाई कन्जुस्याई नगर्ने निर्माताको रुपमा थप स्थापित गराईदियो । काठमाडौ¸ पोखरा र मुस्ताङका रमणिय स्थानहरुमा छायांङ्कन गरिएको यो चलचित्र हेर्नका लागी पनि निकै नै सुन्दर बनेको थियो । यस चलचित्र दर्शकहरु ले निकै रुचाईदिएपछि यहि चलचित्रको सिक्वेलको रुपमा पुनः अर्को चलचित्र निर्माण भयोः प्रेमगीत २ ।
​चलचित्र प्रेमगीत २ पनि विशुद्ध प्रेमकथामा आधारीत चलचित्र थियो तर यसमा प्रेमका विभिन्न उतारचढावहरु तथा बदलाको भावना लाई पनि मिसाईएको थियो । मुख्य नायकमा अघिल्लो फिल्मकै नायक प्रदिप खड्का दोहोरिएका थिए भने नायिकामा अश्लेषा ठकुरीले पहिलो पटक अभिनय गरेकि थिईन । चंखे शंखे पंखे र प्रेमगीतका स्क्रिप्ट राईटर रामशरण पाठकको काधमा यस चलचित्रको निर्देशनको जिम्मेवारी परेको थियो । एउटा नेपाली भाषी बर्मेली युवतीको नेपाली केटा संगको प्रेम अनि प्रेम प्राप्तिको लागी थाईल्याण्डमा गर्नुपरेको संघर्षलाई यस चलचित्रलाई मुख्य विषय बनाईएको थियो । बर्मा देखि थाईल्याण्ड र नेपालको मुर्मा सम्मको प्रेमिल यात्रालाई यस चलचित्रमा निकै आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरिएका कारण यस चलचित्र बर्षको सर्वाधिक सफल चलचित्रको सुचिमा पर्न पनि सफल भयो । प्रेमकथामा धेरै चलचित्रहरु बने पनि यस चलचित्रमा प्रेमकथा लाई अलग्गै ढंगले प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसरी लगातार एकपछि अर्को चलचित्र निर्माण गर्दै आएको आशुसेन फिल्मस र निर्माता सेन यस चलचित्रको सफलता पश्चात साच्चै नै चलचित्र उद्योगको एउटा दरिलो मेरुदण्ड बनेका छन । अहिले त अवस्था यस्तो पनि आएको छ कि दर्शकहरु यस ब्यानरबाट अव अर्को चलचित्र कहिले निर्माण हुन्छ भनेर सोच्न थालेका छन । यहि मेसोमा निर्माता सेन एउटा विल्कुलै अलग विषयमा आफ्नो चौथो कोशेलीको रुपमा मेरो मामु शिर्षकमा चलचित्र लिएर यहि भाद्र १५ गते सिनेमा हलहरुमा आउदै छन । आमा र छोरा विचको सम्बन्धको बारेमा अनि एउटा कलिलो उमेरको बच्चाको मनोविज्ञानमा आधारीत रहेर यो चलचित्र निर्माण हुदै छ । बच्चा र आमा विचको दुरीको कारण बच्चाहरुमा देखिने समस्या ईलेक्ट्रा कम्प्लेक्स लाई यस चलचित्रले उठान गरेको छ ।
​आमा र छोराको विचको सम्बन्ध¸उतारचढावको बारेमा धेरै चलचित्र बने होलान विदेशमा । यहा पनि केहि एकाध चलचित्र बनेका छन तर एउटी महिला किन आमा बन्न चाहन्छे ? कस्तो सन्तानको आशा राख्छे?कति सम्म त्याग गर्ने सक्छे आफ्नो सन्तानको लागी ? सन्तान जन्माएर मात्र आमा कहलिन्छे वा कहलिन्न ? अन्य बच्चामा पनि आफ्नै सन्तानको प्रतिविम्ब देख्छे या देख्दिन ? अनि एउटा बालक जो आफ्नो जन्मदिने महिलामा मात्र आमाको रुप देख्छ ? अरु महिलालाई किन नकारात्मक देख्छ ? शब्दमा शाब्दिक तर्कहरु प्रस्तुत गर्न नसके पनि उस्ले कस्तो खालको ममता चाहेको छ ? जो आफुसंग छैन किन उसैलाई मात्र सम्झिन्छ र जस्ले अगाध माया गर्छे उस्मा किन आमाको रुप देख्दैन ? यिनै एउटि ममतामयी आमा र अबोध बालक विचको अन्तरद्धन्द¸ माया खोजिरहेको मायाको भोको र माया बाडन नपाएकी महिला विचको मनोबैज्ञानिक कारणहरुमा केन्द्रित रहेर निर्माण हुदै गरेको चलचित्र हो मेरो मामु । के बच्चा जन्माउनु मात्र आमा बन्नु हो त ?
आमा शब्दको परिभाषा बयान गरेर साध्य छैन । किन र के कारण ले एउटा बच्चाले अरु महिलामा आमाको रुप देख्न सक्दैन ? के चाहन्छ उ ? आफ्नो लागी अहोरात्र मरिमेटने महिलालाई किन उ आमा भन्न सक्दैन ? किन सम्बन्ध टिक्न सकिरहेको छैन ? यि यावत प्रश्नहरुको सहज उत्तर हो यो चलचित्र ।
स्क्रिप्ट लेखनमा निकै समय खर्च गरेको आसुसेन फिल्मसले यस चलचित्रलाई अब्बल बनाउन कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको छ । चलचित्र मात्र ढाईघण्टा मनोरन्जनको लागी मात्र नभएर हलबाट निस्किसकेपछि त्यसबाट केहि कुरा सिकेर जिवनमा लागु गर्न सके मात्र सम्बन्ध मजबुत हुन सक्नेछ । प्रस्तुतिकरण कस्तो छ¸ मेरो मामु शिर्षकलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ¸ भाद्र १५ गते पक्कै पनि हामिले नियाल्न पाउने नै छौ । अहिलेलाई यति भनौ प्राविधिक रुपमा अब्बल हुदै गएको हाम्रो चलचित्र उद्योग राम्रो कथा बाचनमा पनि आउन थालेको छ र यहि राम्रो कथा बाचन गरिएको चलचित्र हो मेरो मामु¸ निर्माता सेन ले बताए । कथा चलचित्रको मुटु¸ पटकथा मेरुदण्ड हो निर्देशक चलचित्रको मगज हो¸ निर्माता पोषक तत्व हो जस्ले स्वस्थ मुटु र दरिलो मेरुदण्डलाई सदा बलियो राख्न मद्धत गर्दछ । चलचित्र उद्योगका यति पोषिला निर्माता सन्तोष सेनले पक्कै पनि यो चलचित्रलाई मन छुने किसिमले निर्माण गर्नेमा कुनै शंका छैन
Next नेपाली कथानक चलचित्र ‘नाइ नभन्नु ल–५’ को आज सम्मको व्यापार ३ करोड माथि